बैग मर्मतसम्बन्धी सुझावहरू तपाईलाई थाहा छैन - समाचार - ड Dong्गगुआन यिहुआ हैंडबैग कं, लिमिटेड
घर > समाचार > उद्योग समाचार > ब्याग मर्मत सल्लाहहरू तपाईलाई थाहा छैन
भनिन्छ कि ब्यागहरू एक महिलाको दोस्रो प्रेमी हुन्, त्यसोभए हामीले कसरी आफ्नो "प्रेमी" लाई व्यवहार गर्नुपर्दछ? एउटा झोला खरीद गरेपछि, विशेष गरी महँगो ब्याग जुन कि उच्च मूल्यमा किनेको छ, यो ठीक मर्मत प्रविधिहरू जान्नु बढी आवश्यक छ। यदि हामी यसलाई राम्रोसँग व्यवहार गर्दैनौं भने, यो चाँडै ओइलिनेछ र खस्नेछ, र फूलले यसको रंग गुमाउनेछ। आज हामी झिक मर्मतका केहि तरिकाहरू र विधिहरूको बारेमा कुरा गर्ने छौं।
Q: कस्तो प्रकारको सुरक्षा उपायहरू छालाको झोलाहरूको लागि पहिलो विकल्प हुन सक्दछ जुन भर्खर सुरु भयो?
उत्तर: छालाको झोला खरीद गरेपछि, आफ्नो पछाडि वरिपरि दगुर्दा चिन्ता नगर्नुहोस्। हामीले आफ्नो छालाको झोलाका लागि "लुगा लगाउनु पर्छ"। छालाको झोलाहरूका लागि, विशेष गरी अत्यन्त महँगो पहिलो लेयर काउहाइड ब्याग, हामी किन्छौं त्यस पछि, "डर्मिस कोटिंग एजेन्ट" को एक तह थप गर्नु पर्छ। धेरै मानिसहरूले यसको बारेमा सुनेका छैनन्। यो Taobao मा उपलब्ध छ। वास्तवमा, हामीसँग सामान्यतया छाला कोटिंगको साथ सम्पर्क हुन्छ। जब तपाईं कार ब्यूटी शपमा कार भित्रको सीटहरूको ख्याल राख्नुहुन्छ, सौन्दर्य पसलका मालिकहरूले कार माउन्ट सफा गरेपछि कार सीट सिप गर्दछ। "। यो झोलामा थपे पछि, यो वास्तवमा ब्यागमा पारदर्शी फिल्मको थप तह थप्नको बराबर हो। यसको साथ यसले प्रभावशाली रूपमा धुलो र फोहोरलाई रोक्न सक्छ, र छालाको फाइबर छिद्रमा प्रवेश गर्नबाट धुलो र धुलोलाई रोक्न सक्छ।
Q: ब्यागको गुणस्तर जति छ, यो त्यति वाटरप्रूफ छ?
उत्तर: सबै भन्दा राम्रो गुणस्तरको ब्यागहरू छालाको ब्यागहरू हुन्, तर छालाको ब्यागहरू पनरोक हुँदैन। सामान्य छालाको झोलाहरू वाटरप्रूफ र तेल-भगाउने सामग्रीसँग जोडिन्छ। मध्यम वाटरप्रूफनेस ठीक छ, तर तपाईंले यसलाई भिजेको पछि चाँडै नै प्रयोग गर्नुपर्दछ। सफा तौंलीको साथ ड्राई वाइप गर्नुहोस् (चश्माको कपडा वा स्पन्ज प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ)। यदि पानी छ भने, यो ढुसी बनाउन सजिलो छ। सामान्य रूपमा वर्षाको दिनमा, यदि तपाईंलाई यात्रा गर्नु परेमा, यस किसिमको पेटेन्ट छालाको झोला बोक्नु उत्तम हुन्छ। पेटेन्ट छालाको वाटरप्रूफनेस सामान्य झोलाहरू भन्दा पक्कै बलियो छ, किनभने छाला वा PU को सतहमा पेन्टको एक तह छरिएको हुन्छ, जसको चिल्लो र उज्यालो प्रभाव छ। , यो प्याटेन्ट छालाको प्रक्रिया हो, यो पेन्टको लेयर प्रभावकारी रूपमा वाटरप्रूफ गर्न सक्दछ, र यसलाई सफा गर्न सजिलो हुन्छ।
प्रश्न: ब्यागमा सफा गर्न गाह्रो तेलको धूलोलाई कसरी व्यवहार गर्ने?
उत्तर: पहिलो विकल्प बैगको सामग्रीमा निर्भर गर्दछ। यदि यो PU, microfiber, PVC, नायलन, डेनिम र अन्य गैर छालाको ब्यागहरू छन् भने हामी साबुन र डिटर्जन्ट प्रयोग गर्न सक्छौं, र त्यसपछि सफा तौंली सफा गर्न प्रयोग गर्न सक्छौं। तर यदि यो वास्तविक छाला हो भने साबुन वा डिटर्जेंट प्रयोग नगर्नुहोस्। डर्मिसको अन्टोनेमेनेसनको लागि "डर्मिस सफाई एजेन्ट" को उपयोग आवश्यक पर्दछ, जुन टोबाओमा उपलब्ध छ। Dermis एक पेशेवर संग सफा गर्नुपर्दछ, अन्यथा यसले सजीलो प्रोटोक्सलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ।
प्रश्न: ब्याग भिजेपछि घाममा पर्न सक्छ?
उत्तर: होईन, ब्याग जेसुकै सामग्री हो, तपाईंले घाममा पर्नु हुँदैन। यदि यो भिजेको छ भने, यसलाई पहिले तौलियाले सफा गर्नुहोस्, त्यसपछि झोलाको सतहमा पानी चुस्नको लागि स्पन्ज प्रयोग गर्नुहोस्, र प्राकृतिक हावामा वायुवायुयुक्त ठाउँमा राख्नुहोस्। यदि यो छाला हो भने, सूर्यको प्रत्यक्ष सम्पर्कले छालालाई सुख्खा र क्र्याक गराउँदछ, यदि यो छालाको झोला होईन भने पनि, यो घामसँग मिल्नेछ।
प्रश्न: झोला मोल्ड भएपछि मैले के गर्नुपर्छ?
उत्तर: ढुसी झोलाहरू प्राय: नमको कारण हुन्छन्। तपाईले जहिले पनि नमीमा ध्यान दिनु पर्छ। यदि नमका संकेतहरू छन् भने, यसलाई हावामा राखिएको ठाउँमा लैजानुहोस् र केही बेर सुक्नुहोस्। मोल्डको विकास पछि, पहिलो विकल्प भनेको मोल्ड स्पटबाट मोल्ड खरानी पूर्ण रूपमा सफा गर्नको लागि एन्टी मोल्ड डिटर्जेंटको साथ स्पन्ज डुबाउनु हो र त्यसपछि यसलाई हावामा राखिएको ठाउँमा सुकाउनको लागि राख्नु हो। सुकाइसकेपछि, झोलाको राम्रोसँग उपचार गर्न झोलाको सतहमा मोल्ड र जीवाणुरोधी एजेन्टलाई मेटाउन सम्झनुहोस् (स्प्रे गन राम्रो छ, तपाईले झोलाको सतहमा पनि स्प्रे गर्न सक्नुहुन्छ, ताबाओमा स्प्रे गनको मूल्य हो) लगभग yuan० युआन)। यहाँ प्रयोग भएको "एन्टी मोल्ड क्लीनर" र "एन्टि-मोल्ड एन्टिब्याक्टेरियल एजेन्ट" पनि धेरै सस्तो छन्। Taobao मा मूल्य दसौं युआन को एक बोतल को बारे मा छ, त्यसैले तपाईं यो घर मा राख्नु पर्छ। (थप रूपमा, यदि तपाईंसँग यी चीजहरू तपाईंको घरमा छैन भने, भिनेगर पनि सम्भव छ, तर प्रभाव पेशेवर क्लीनरको रूपमा राम्रो छैन।)
Q: जुत्ता पोलिश ब्यागहरू कायम राख्न प्रयोग गर्न सकिन्छ?
उत्तर: होईन, छालाको जुत्ता र ब्यागहरू दुई फरक चीजहरू हुन्। तपाईं पैसा बचाउन आफ्नो झोला कायम राख्न जुत्ता पोलिश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईं आफ्नो झोलाहरू कायम राख्न जुत्ता पोलिश प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, नतिजा र color फीका हुनेछ। यो मेरो व्यक्तिगत परीक्षणको परिणाम हो। सामान्यतया, छालाको झोलाहरूमा पेशेवर हेरचाह तेल लागू गर्न नबिर्सनुहोस्। यस प्रकारको राम्रो गुणस्तर, ताबाओको मूल्य १०० युआन बोतल हो, यदि यो तपाईले लक्जरी ब्यागमा किन्नुभयो भने सामान्यतया पेशेवर हेरचाह तेल लागू गर्न नबिर्सनुहोस्, आखिरमा यसको मूल्य लाग्नेछ। तपाईले धेरै नै किन्नुभएको झोलाको ख्याल राख्नुहुन्न।
प्रश्न: यो झोला कसरी राख्ने जब यो प्रयोगमा छैन?
उत्तर: गैर बुनेका झोलाहरू यहाँ प्रयोग गरिने छ। जब सबैले ब्यागहरू खरीद गर्दछ, विक्रेताहरूले उनीहरूलाई गैर-बुनेको ब्यागहरू दिनेछ। म विश्वास गर्दछु कि धेरै व्यक्तिले यसलाई फोहोरको रूपमा फालिदिन्छन् र लाग्छ कि यसको कुनै प्रभाव छैन। वास्तवमा यो गलत छ। ओह। गैर बुनेको झोलाहरूको ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हामीले झोला गैर-बुनेको थैलाहरूमा राख्यौं, जसले डस्टप्रूफमा भूमिका निभाउन सक्छ, र पानी-विकर्षक र ओस-प्रुफ कार्यहरू पनि गर्दछ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, गैर बुनेको कपडा सास फेर्न पनि सकिन्छ, ताकि जब छालाको झोला भण्डार गरिन्छ, यो प्लास्टिकको झोलामा जत्तिकै अभेद्य हुनेछैन र छालाको झोलाको छाला पनि सुख्खा र बिग्रिएको छ। यदि यो स्टिरियोटाइप गरिएको झोला हो भने तपाईले यसमा कागज राख्न सक्नुहुन्छ जब प्रयोगमा हुनुहुन्न (सामान्यतया यो झोलामा समावेश हुन्छ जब तपाई स्टिरियोटाइप बैग किन्नुहुन्छ, यसलाई फ्याक्न नबिर्सनुहोस्), तपाईले झोलाको आकार समाउन सक्नुहुन्छ धेरै लामो समयको लागि छोडे पछि यसलाई विकृत हुनबाट रोक्नुहोस्। ।
Q: छाला वा PU ब्यागहरू मैन गर्नु आवश्यक छ?
उत्तर: सामान्यतया, यो आवश्यक छैन। Waxing को उद्देश्य पानी र तेल लाई रोक्नु हो। जब झोला बनाइन्छ, जलरोधक सामग्री सामान्यतया सतहमा थपिन्छ। वैक्सिंग आवश्यक छैन। सामान्य मर्मतसम्भारमा, व्यावसायिक लेदर हेरचाह तेलको साथ सतह मेटाउन वास्तवमा पर्याप्त छ।
प्रश्न: यदि झोला बिग्रिएको वा बिग्रिएको छ भने मैले के गर्नुपर्छ?
उत्तर: यदि बहुमूल्य छालाको झोला बिग्रिएको छ भने, यसलाई पेशेवर मर्मतसम्भार मर्मत पसलमा समयमै मिलाउनका लागि पाउनुहोस्। यसको बारे आफैंमा चिन्ता नलिनुहोस्, ताकि ठूला समस्याहरूबाट बच्न। यस समयमा तपाईसँग झोलामा "शल्यक्रिया" हुनु आवश्यक छ। त्यसोभए त्यसमा एकदम नयाँ लुक छ। सामान्यतया, यदि छालाको झोला बिग्रिएको छ भने, यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छैन। यदि पुरानो आउँदैन भने नया आउँदैन, त्यसो भए झोला परिवर्तन गर्नुहोस्।
अर्को:सानो कुपनले तपाईंलाई ठाउँ बचत गर्न ब्यागहरू भण्डारण गर्न सिकाउँछ